छुटाउनु भयो कि ? – Page4– Nepali Health
April 5, 2020 April 6, 2020 Nepali Health 1
पृथ्वीमा मानवको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडी नै जिवाणु (व्याक्टेरिया) र विषाणु ( भाइरस)हरुको उत्पत्ति भएको हो । आज भन्दा करीब साढे ३ अर्व बर्ष अगाडी व्याक्टेरिया, डेढ अर्व बर्ष अगाडी भाइरस र १ लाख ३० हजार बर्ष पहिले मानवको उत्पत्ति भएको भएको मानिन्छ ।
April 3, 2020 April 4, 2020 Nepali Health Comment
April 3, 2020 April 5, 2020 Nepali Health 1
April 2, 2020 April 3, 2020 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, २० चैत । गत ४ चैतमा कतार एयर QR -६५२ बाट नेपाल आएका यात्रुमध्ये अहिलेसम्म ३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । यी तीनै जना महिला हुन् ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई विदा दिने कि नदिने ? मन्त्रालय र विभागको फरक-फरक निर्देशन
काठमाडौँ, २० चैत । कोभिड – १९ को महामारीको बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई विदा दिने कि नदिने भन्ने विषमया स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागको फरक फरक सूचनाले स्वास्थ्यकर्मी अन्योलमा परेका छन् ।
April 1, 2020 April 2, 2020 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, १९ चैत । सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) संग मेडिकल खरीद सामग्री रद्ध गरेको छ । उक्तसमूहसंग करीब करीब १ अर्व २४ करोड बराबरको सम्झौँता गरेको थियो ।
March 31, 2020 March 31, 2020 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, १८ चैत । वीर अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा सोमबार मृत्यु भएकी महिलाको कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । सोमबार सोही अस्पतालमा मृत्यु भएका शंकास्पद अर्का एक व्यक्तिको भने रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
March 24, 2020 March 24, 2020 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, ११ पुस । फ्रान्सबाट कतार हुँदै ४ चैतमा काठमाडौँ ओर्लिएकी एक किशोरीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सरकारले उनी आएको हवाईजहाजमा यात्रा गरेका अन्य यात्रुको समेत खोजी गरेको छ ।